Sababaha Keena Burooyinka Wajiga Iyo Qoorta & Sida Loo Daaweeyo - Gaaloos.com ≡Navigasi Menu
→ Sababaha Keena Burooyinka Wajiga Iyo Qoorta & Sida Loo Daaweeyo
Sidaynu ognahay wajiga dumarku wuu ka jilicsanyahay jidhka kale, waayo wa jidh markasta dumarku wax marinayaan, hadaba waxa jirta in wajigu qaato jeermiska ugu badan oo ka soo raaca gacmaha iyo hawadaba. Tusaale ahaan sida caadada inoo ah Somali ahaan dumarku waxay ku maydhaan wajiga saabuun ama (shower Gel) ka bacdi gabadhu waxay u haystaa inay intaa kaga dhantahay maydhistii wajigu. Isla wakhtigaas gabadhu maydhayso jidhkeedoo dhan ee ay ka soo baxayso baadka, Bal waxad samaysaan cudbi (cotton pads) ku shuba biyo yar oo milix leh, ama liindhanaan kuna xoqa wajiga waxaydun arki cudbigii oo noqday buni oo ka tagay cadaankii waxaasina waa (dead/ dirty skin cells). Had iyo jeer markaad wajiga taabanaysaan gacmihiina maydha marka hore oo qalajiya waayo gacmaha ayaa sita jeermiska ugu badan runtiina aan la qiyaasin Karin, markaa waxa fiican in markasta gacmaha la hor maydho intaan wajiga la taaban. Tusaale kale hadaan idin sheego cilmi baadhis lagu sameeyay (mobile phone) ka gacanta ayaa waxa lagu ogaaday inuu ka jeermis badan yahay ka suuliga , waxaana soo raaca kuna uruura jeermis aan xad lahayn ama aan la qiyaasi Karin. Markaa hadii adigoo saacad (mobile phone) gacanta ku hayay, hadana aad qasil kuu diyaar ahaa ku mariso wajiga iska daa jeermisku haysatay wajigaasiyee, boqolaal kale ayaad ku sii kordhisay, waxaasina waa waxa jidhka hoose u gudba, hadhoowna dhibatooyinka badan eek ala duwan dibada u soo saara. Intaasi wa talo aan ku saasabn sidaad oga ilaalin lahaydeen (bacteria) wajigiina ku dhagta.!!!